Steve Ọrụ nkiri | Esi m mac
Ihe nkiri Steve Jobs kacha ọhụrụ merie Golden Globes abụọ
Ihe nkiri kachasị ọhụrụ banyere ndụ Steve Jobs na ndị isi agwa gụnyere Michael Fassbender dị ka Steve Jobs na onye na-eme ihe nkiri Kate Winslet dị ka Joanna Hoffman, onye bụbu onye isi ahịa ahịa ahịa Macintosh na nnukwu onye nkwenye Steve Jobs, ahọpụtara maka onyinye 2016 Golden Globes.
Maka oge a, nhọpụta maka onyinye a dị ebube adịgideghị naanị na ndị omee abụọ a na otu nhọpụta ndị ọzọ ha nwere nke ahụ: Omume kachasị mma nke onye na-eme ihe nkiri na fim - Drama na Best Original Soundtrack, kama enọ ahụ abụghị maka ihe nkiri nke Aaron Sorkin depụtara.
Na njedebe Golden Globes abụọ ahụ were ha: Ihe ngosi kacha mma na arụmọrụ kacha mma site na onye na-eme ihe nkiri Kate Winslet. Universal nwere nnukwu ochuchu oru n'aka ya n'agbanyeghị na ọ bụ eziokwu na atụmanya ndị mbido dị elu nke ukwuu, ihe nkiri a jiri nwayọ nwayọ belata ma ebuliteghị ego a tụrụ anya na ihe nkiri, ọbụnadị na-agbasa agbasa na ụfọdụ ihe nkiri. Na Jenụwarị 1 a tọhapụrụ ya na Spen na ọ bụ eziokwu na ọ nabatala ọfụma n'ọfịs igbe, mana ikekwe ọ bụghị ihe niile achọrọ na enweghị nkwenye data ndị a.
Ihe bu eziokwu bu na ihe Danny Boyle kwuru nweta ebe na nhọpụta maka Oscars Osote ọzọ O yiri ka ha na-abịarukwu nso na nhọpụta na onyinye ndị a enwetara na Golden Globes.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Esi m mac » Apple » ọtụtụ » Ihe nkiri Steve Jobs kacha ọhụrụ merie Golden Globes abụọ
Applelọ ahịa Apple ọhụrụ abụọ ga-emeghe na China n'otu ụbọchị
10 nde Apple Music ọrụ